Soomaaliya, 02 January 2019
Arbaco 2 January 2019
Maxay ka dhigan tahay cayrinta Haysom ee Soomaaliya?
Dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ergayga gaarka ah ee Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya Nicholas Haysom aan laga rabin Soomaaliya isla markaana uusan ka shaqayn karin waddanka.
Wareysi: Sida loo xaliyo muranada dhulka ee Muqdisho
Cumar Macalin Xasan “Cumar Tugumbo” oo hore ugu soo shaqeeyey dhul bixinta Soomaaliya waa diiwaan-hayaha sharciyada dhulka iyo guryaha ee Soomaaliya. Waxaana diiwaanka iyo aqoonta uu u leeyahay ku kala saaraa dadka ku muransan dhulalka ee Muqdisho.
Burco: Sideed qof oo ku dhintay shil gaari
Ilaa siddeed qof ayaa geeriyooday, laba kalena waxa soo gaaray dhaawac ka dib markii shil gaari uu ka dhacay duleedka magaalada Burco.
Somaliland: Waan lasii shaqaynaynaa Haysom
Xukuumadda Somaliland ayaa sheegtay in go’aanka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibedda Soomaaliya ee la xidhiidha wada-shaqaynta ergayga gaarka ah ee Qaramada Midoobay Nicholas Haysom, aannu khusaynin.
Dhaqanka iyo Hiddaha, Qeybta 452-aad
Dowladda Soomaaliya oo eriday Ergayga QM u qaabilsan Soomaaliya
Dowladda Soomaaliya ayaa eriday ergayga gaarka ah ee Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya Nicholas Haysan, kaddib marki ay ku eedeysay inuu faragalin ku sameeyey madaxbanaanida dalka Somalia.
DFS: Hayson Wadanka Lagama Rabo, Kamana Shaqeyn karo
Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in wakiilka Xoghayaha Guud ee QM Soomaaliya Nicholas Haysom aanu ka shaqeyn karin Soomaaliya, kadib markii sida ay sheegtay uu farageliyay madaxbannaanida Soomaaliya.
QM oo cambaareysay weerar lagu qadaay xarunta Xalane
Qaramada Midoobay ayaa xaqiijisay in laba ka tirsan shaqaalaha Qaramada Midoobay iyo qof qandaraasle ah ay ku dhaawacmeen weerarro loo adeegsaday hoobiyayaal oo lagu qaaday xarunta Qaramada Midoobay ee ku dhex taalla Xalane.
Wakiilka xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay ee Soomaaliya Nicholas Haysom ayaa dowladda Soomaaliya ka dalbaday inay faahfaahin ka bixiso qulqulatooyinkii siyaasadeed ee ka dhacay magaalada Baydhabo.
Galka Baarista: Muranada dhulka ee Soomaaliya
Haweenka oo hal xubin kaliya ka helay baarlamanka Puntland